Railway Empire: inowedzera DLC nyowani inonzi Iyo Great Lakes | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida zvitima, zvirokwazvo iwe unotoziva kare Chitima Humambo vhidhiyo mutambo iyo inowanikwa yekuisa pane yedu GNU / Linux distros. Pasina mubvunzo mutambo wakanaka uyo unobvumidza iwe kuti utarisise terevhizheni network munzira chaiyo uye ine inonakidza graphic ruzivo. Uyu mutambo wevhidhiyo unowanikwa muzvitoro zvakasiyana siyana kuti utenge uye utore mumesisitimu yedu pamutengo unodhura unosvika ma € 7,99 uye unokosha kwazvo kune izvo zvaunounza ...
Kana iwe uchifarira kuwana uyu mutambo wevhidhiyo iwe unogona kuwana zvitoro inonyanya kuzivikanwa varaidzo yedhijitari. Uye zvakare, iwe ikozvino une DLC nyowani inowanika, kuwedzera pamwe nezviri mukati izvo zvichavandudza izvo zvatove zviripo mune yekutanga zita nemazhinji maficha maficha atichazokuudza iwe nezvazvo. Unogona kutarisa zvimwe muzvitoro Humble Store, Gogi uye, chatinofarira, chitoro cheValve chiutsi yatinotaura zvakanyanya muLxA blog. Sekutaura kwevagadziri vayo, Rail Tycoons yanga ichishanda nesimba kusimudzira uku kuwedzera kwehushe hwako hwechitima, iine maficha nyowani nenharaunda. Mushure mekuwedzera yekumaodzanyemba kweMexico, ikozvino neiyi nyowani DLC Tichavawo neCanada yekuenderera mberi kuchamhembe seKalypso Media yazivisa nekutenda kune iyi DLC (Dhawunorodha Zvemukati kana zvinyorwa zvirimo muSpanish) Railway Empire: The Great Lakes.
Kana iwe uchida kuziva kuti chii chitsva chauinacho muThe Great Lakes, iwe unofanirwa kuziva kuti iyo DLC ichawedzera kugona uye maficha eRailway Empire kupfuura zvaunotarisira. Wakawedzerwa zviitiko zvitsva neDominion Day (1860-1880), akawedzera mamepu nenzvimbo nyowani dzekuchamhembe, maguta matsva 19 uye zvipfeko zvechando, kugadzirisa mamiriro ekunze kugadzirisa mamiriro emamiriro ekunze kumatunhu ekuchamhembe, husiku husina mamiriro, nezvimwe. Iwe zvakare une chikamu 1.5 chinowanikwa kuRailway Empire ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Chitima Humambo: Wedzera DLC nyowani inonzi Iyo Great Lakes